17a-Hydroxyprogesterone Acetate ntụ ntụ (302-23-8) hplc≥98% | AASraw
/ ngwaahịa / ndị ọzọ na- / 17a-Hydroxyprogesterone Acetate ntụ ntụ (302-23-8)
Rating: SKU: 302-23-8. Category: ndị ọzọ na-
AASraw nọ na njikọ na ike imepụta site na gram ruo n'usoro nke 17a-Hydroxyprogesterone Acetate Powder (302-23-8), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa njikwa mma.
17a-Hydroxyprogesterone Acetate ntụ ntụ (302-23-8)
17a-Hydroxyprogesterone Acetate ntụ ntụ (302-23-8) Specification:
Ngwurugwu Chemical: Product Name:17a-Hydroxyprogesterone acetate
Cas Mba: 302-23-8
molekụla Formula: C23H32O4
molekụla arọ: 372.51
17a-Hydroxyprogesterone Acetate ntụ ntụ (302-23-8) Daha:
17a-Hydroxyprogesterone acetate bụ adịghị ọcha nke Megestrol acetate. Megestrol acetate bụ progesin steroidal nke otu 17a-hydroxyprogesterone nke a na-eji agwọ ọrịa ara na ọrịa cancer endometrial na dị ka agụụ na-akpali akpali. Ọ bụ ester nke 17α-acetate nke megestrol, nke, n'ụzọ dị iche na MGA, anaghị azụ ahịa maka iji ọgwụgwọ.